एजेन्सी । सामान्यतया ५ वर्षभन्दा मुनिका बच्चाहरुलाई कफी पिउन मनाही गरिन्छ । तर इन्डोनेशियामा एक बालिका रहेकी छिन्, जसले हरेक दिन १.५ लिटर कफि पिउने गर्छिन् । अचम्मको कुरा के रहेको छ भने, बालिका अहिले भर्खर १७ महिना पुगेकी छिन् र यति मात्रामा कफी पिउँदा पनि उनी स्वस्थ रहेकी छिन् । विस्तृतमा
यस्तो पनि ! १० रूपैयाँमा साडीको सेल, महिलाहरुको भीड बढेर भागदौड
हैदराबाद । भारतको हैदराबादस्थित सिद्दीपेटको एक सपिङ मलले भारु १० मा साडी बिक्री गर्न थालेपछि मलमा महिलाहरुको भीड बढेर भागदौडको अवस्था सिर्जना भएको छ ।
यसरी कृष्ण सोह्र हजार पत्नीका पति हुन पुगे
एजेन्सी । कृष्णको गोपिकाहरुसँगको प्रेम र सोह्र हजार रानीहरुको घटनालाई यदाकदा चर्चाको विषय बनाउने गरिन्छ ।
अम्बानीको ११ हजार करोडको घरमा किन छैन ‘एसी’ ?
यी शक्तिशाली महिला जसले एक्लै शासन गर्ने आँट देखाए
विश्वभर राज गर्नु कुनै सजिलो काम होइन । भन्निछ राजतन्त्रमा राज गर्ने पुरुषले मात्र हो । उनीहरु नै राजनीतिको राम्रो सुझुबझ भएको मानिन्छन् । तर, इतिहासमा यस्ता घटनाहरु पनि भए जसले आफ्नो बलका भरमा आफ्नो देशमा महिलाहरुले राज गरे । आउनुहोस् महिलाहरुको राज शासनबारे जानौ ।
विश्वका केही यस्ता देशहरु जसबारे कमैलाई थाहा छ